DEG DEG: Duqeyn kale oo culus oo lala beegsaday garoon ku yaal Sacuudiga - Allbanaadir Media | Allbanaadir Media
DEG DEG: Duqeyn kale oo culus oo lala beegsaday garoon ku yaal Sacuudiga
Kooxaha Xuutiyiinta ee Yeman ayaa mar kale Duqeyn loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ku garaacay Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Abha oo Caasimad u ah Gobolka Asir ee dhaca Koonfur Sacuudiga.
Kooxaha duqeyntaas geystay ayaa sabab u dhigay inay u aargudayaan dadka aan wax galabsan oo ay Sacuudiga ku xasuuqayaan gudaha Yeman Afartii Sano ee lasoo dhaafay.
Garabka Ansarullah ayaa garoonka Diyaaradaha ee Abha duqeysay iyadoo adeegasneyso Diyaarada Qasef K2 oo ah nooca aan duuliyaha laheyn Axaddii sida uu baahiyey Talefishinka kooxdaan ee Al-Masirah TV.
Garoonka Diyaaradaha ee Abha ayaa ku yaal Buurta Caanka ah ee isla magacaas wadato taasoo ku taalo Koonfur Galbeed ee Dalka Sacuudiga.
Duqeyntaan ayaa kusoo aadeyso xilli Sabtidii duqeyn loo geystay isla garoonkaan iyo Gobolka kale ee dariska la ah ee Jizan, waxaana duqeyntaas iyadana loo isticmaalay isla nooca diyaradda ee la adeegsaday duqeyntii Shalay.
Xuutiyiinta dalka Yeman ayaa muddooyinkii dambe sii xoojiyey duqeymaha iyo weerarada ay ku qaadayaan gudaha Sacuudiga, waxayna inta badan beegsadaan Jizan, Najran, Abha iyo Khamis Mushait.
Duqeyntii ugu darneyd ayey kooxdaan Bishii hore ka fulisay Goobaha shidaalka laga soo saaro ee ku yaal Caasimadda Sacuudiga ee Riyadh.
Kooxda Xuutiyiinta ayaa horey ugu hanjabtay inay duqeymo ka geysan doonto dhammaan Garoomada Sacuudiga ku yaal ee qeybta ka ah howlaha Militari ee ka socdo Yeman inta ay Sacuudiga iyo Xulafadeeda ku sugan yihiin Garoonka Caalamiga ee Diyaaradaha ee Sanca.
Dowladda Sacuudiga iyo Xulafada ay hoggaamineyso ayaa dalka Yeman ku dilay ilaa 15,000 kuwaas oo intooda badan ahaa dad rayid ah oo aan waxba galabsan.